Yintoni iphupha lamagundane amhlophe athetha ntoni: kutheni uphupha ngegundane elinye okanye iigundane ezimhlophe
Iphupha malunga namagundane amhlophe kunye nokutolika kwabo.
Naliphi na intonga eyenza abantu abaninzi banemizwa engathandeki kakhulu. Kodwa, umzekelo, iigundane ezimhlophe okanye iilati ziba ziilwanyana. Kodwa namhlanje siza kuxela malunga neziganeko zexesha elizayo eziza kuzisa iphupha, apho izilwanyana zalo mbala zibonakala.
Ngokuqhelekileyo amagundane amhlophe anenani elilinganayo kwiincwadi zokuphupha, kunye nezilwanyana ezinombala oqhelekileyo. Kodwa ezinye iintlukwano zikhoyo.
Imouse emhlophe ibonisa umhlobo onentsingiselo ohlala edala izibilini ngasemva kwakhe, ngenxa yokuba lowo uphuphayo unokuba neengxaki zobomi.
Umbala weenwele zeentonga zingathetha ukuba utshaba ngumfazi. Ngokukodwa eli xabiso lifanelekileyo ukuba imicebe emhlophe iphupha yindoda.
Ezinye iincwadi zephupha zichaza ngokungafaniyo, ngoko ziphi na izilwanyana eziphuphayo. Ngaphandle ezimbini iigundane ezimhlophe, ingakhankanyi ngokukhankanya, ziqikelele ukungabi nalutho kunye nesizungu kumntu ophuphayo, kodwa ke le mivakalelo engathandekiyo inxulumene neengcambu zeentshaba.
Kuthetha ukuba abantu abafuna ukuguqulwa ngabagwenxa bayasasaza ngawe kwaye bakubeka ekukhanyeni okubi ukuze bahlukane nomthandayo okanye bachithe ubudlelwane nabanye.
Ngubani na amaphupha amantshi amhlophe?
Nangona iindleko ezininzi kwiincwadi zephupha zifana ngokufanayo, kukho ukungafani kwesini kunye nesimo kuluntu.
Impuphu emhlophe ingaphupha umfazi omncinane njengesilumkiso. Mhlawumbi omnye wabahlobo bakhe abasondeleyo, uzama ukuhlula umyeni wakhe.
Kukho uxhomekeke ngokuqinisekileyo kwinani. Inombolo yamagundane ephupheni ibonisa inani leentshaba.
Ukuba intombazana engatshatanga ngaphandle kwembini, ukubaluleka kwephupha malunga namagundane amhlophe akuchasene, kunokuba kulungile. Kwaye nangona okokuqala ngabahlobo bakhe abaya kumphoqa ukuba ayeke indlela yakhe yokuphila, kodwa kamva kamva uya kudibana nendoda ehle kakhulu eya kuba yindoda yakhe kwikamva.
Iincwadi ezininzi eziphuphayo zenza ukugxininisa okukhulu ekukhunjuleni inkcazelo encinane yokulala ukuze iguqule ngokuchanekileyo. Kwimeko yegundane elimhlophe, umntu kufuneka azame ukukhumbula izinto ezenziwe yilwanyana okanye umphuphi.
Omnye ummhlophe omhlophe, oziphatha ngokuzinzileyo, uthembisa inhlanhla enkulu yemali. Kungaba ukunqoba iLotter, ukufumana ilifa elingalindelekanga okanye ukufumana ezinye izinto ezibalulekileyo. Ikhudlwana kunye ne-calmer i-rodent, ephakamileyo amathuba okungahlawulwanga kwemali.
Kwabo bantu bafuna ukufezekisa injongo kunye nokunyanzela ukuya kuso, iphupha elinamakhondu amhlophe lingasebenza njengesilumkiso sangempela. Ngokukodwa ukuba isilwanyana siyaphupha. Oku kusenokuthi ukuba umhlobo osondeleyo kodwa onobuzenzisi uya kuphazamisa ukuphunyezwa kweshishini elicwangcisiweyo.
Musa ukuva buhlungu xa ulunywa yilwanyana - uphawu oluhle. Uthi umntu uya kukwazi ukuqaphela zonke izibilini ngexesha kwaye akukho nto iya kuthintela imicimbi yakhe.
Inxeba ephaphazelekayo ephuma kumlingo ibonisa ukuba ukuze ufezekise injongo, umntu kufuneka abe nezihlobo aze ayeke ukunika abahlobo kwimicimbi yabo.
Bulala imouse emhlophe okanye iimbalwa ezimbalwa. Ngokutsho kwengcaciso ethandwa kakhulu, iziganeko ezinjalo ephupheni kuthetha ukuba umntu unokunqoba zonke iintshaba zakhe, ukujongana neengxaki kunye nokugweba ngokufanelekileyo abo bajongene nabo. Kwaye, akubanga kakubi udaba lomphuphi.
Yintoni ebhokisini kunye nomntu ofileyo ephuphayo ngokuchazwa kwincwadi yephupha?
Ukulala ngesondo, kuthetha ukuthini?
Iphupha, yiyiphi inyoni emhlophe ephuphayo
I-peach mask yokuphela kweenwele ekhaya
Imiqulu ephethe i-avocado, i-salmon kunye nekhukhamba
Iiplums kunye neziqhamo
Amathoyizi asemntwaneni wakho
Isidu esivela kwi-sorrel sinomthi
Izindlela zokucocekisa isikhumba
Ixesha lomzimba nomphefumlo uqala kunye neRoman Resort!
Jikelele i-aneshesia ngexesha lokukhulelwa